Sajhasabal.com |कहिले निको होला बारेकोटको घाउ ? 'वर्षाको भल पानी पिउँदै बाढीपहिरो पीडित'
हेमन्त केसी । भदौ १६, जाजरकोट । चौतर्फी हिमालको पर्खाल ! तलसम्म परेका साना फाँट र फाँटको किनारमा हिउँ पग्लिएर बगेको नलगाड नदी । साँच्चिकै सुन्दर ठाउँ हो बारेकोट ! पूर्वमा डोल्पा, उत्तरमा जुम्ला र पश्चिममा रुकुम पश्चिम रहेको बारेकोट जैविक विविधता र कैयौँ औषधीय मूल्य भएका जडीबुटीको पनि भण्डार नै हो ।
बाह्रवटा कोट मिलेर बारेकोट बनेको यस भूमिको महत्व जिल्लाका अन्य ठाउँकोभन्दा बढी रहेको मानिन्छ । तल्लो भागअर्थात् बेँसीदेखि हिमालसम्म जोडिएको यस ठाउँमा सबै खालको हावापानी पाइने गर्दछ । विश्वमै लोपोन्मुख रेडपाण्डादेखि सुनगिद्ध र चिरकालिजको बासस्थान यही बारेकोटमा पर्दछ । डोल्पा र जुम्ला जान अत्यन्तै छोटो दूरी रहेको बारेकोटलाई पहिरोले छियाछिया बनाउँदा अब पुनःनिर्माणको लागि सबै तहका सरकारको सहयोगका लागि यस ठाउँले याचना गरेको छ ।
बाढी र पहिरोले पानीका मुहानसँगै पाइप लाइपलाइन बगाउँदा बारेकोटवासी वर्षाको भल भएर बगेको फोहोर पानी पिउन बाध्य भएका छन् । “भलको पानी नखाए के खानु ? पानी ल्याउने माध्यम केही छैन । न त पानी शुद्ध गर्ने केही औषधि पुगेको छ न अर्को कुनै विकल्प नै छ”, बारेकोट गाउँपालिका–५ कालाखोलीका हिमाल विकले बताउनुभयो । “माननीयज्यू आएर तत्काल खानेपानीको व्यवस्था हुन्छ भनेर जानुभएको हो, महिना दिन बितिसक्दा पनि केही व्यवस्थापन हुन सकेको छैन” उहाँले गुनासो गर्नुभयो । “त्रिपालको बास छ, मनभरि पीडा छ । जहाँ हेरेपनि मन बुझाउने ठाउँ भेटिँदैन”, विकले भन्नुभयो । दुई हजारभन्दा बढी घरपरिवार शुद्ध पानीबाट वञ्चित भएको स्वास्थ्य तथा सरसरफाइ शाखा बारेकोट गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
वर्षात् रोकिएको छैन । विस्थापित सबै परिवार राहतकै पर्खाइमा छन् । केही संस्था र व्यक्तिले दिएको सीमित राहतले ठूलो सङ्ख्यामा विस्थापित परिवारलाई हात्तीको मुखमा जिरा भएको छ । पोषणयुक्त खानाको अभावमा त्यस क्षेत्रका सुत्केरी, गर्भवती र बालबालिका निकै जोखिममा रहेका छन् । पोषणयुक्त खानेकुरा खान नपाउँदा उनीहरु कुपोषणको शिकार हुने खतरा रहेको स्वास्थ्यकर्मीको भनाई छ ।